Onye ọ bụla na-eji ọkụ ọkụ, gịnị bụ uru ya?
site ha na 21-06-10
Kedu ihe a na-eduga? Aha zuru ezu nke ọkụ ọkụ - ọkụ na-enwupụta ọkụ .Lit emitting diode bụ ụdị semiconductor nke nwere ike ịgbanwe ike eletrik ka ọ bụrụ ike ọkụ. Ngwurugwu a maara nke ọma kwa ụbọchị dị ka ọla kọpa na ígwè bụ ndị nduzi, ebe osisi na roba bụ ndị na-emepụta insulators. The ihe dị n'etiti conduc ...
Kedu ihe kpatara ọkụ ndị na-edu ndú ji agba ọchịchịrị ma gbaa ọchịchịrị?
Onye ọ bụla nwere ahụmịhe ndụ dị otu ahụ Ikanam ọkụ a zụtara bụ mgbe ọ na-enwu gbaa, mana mgbe oge gachara, ọtụtụ ọkụ ga-agba ọchịchịrị ma ọchichiri, kedu ihe kpatara oriọna ikanam ji nwee usoro dị otu a? Ka anyi kuru gi na ala taa! Chọpụta ihe mere gị Ikanam ọkụ na-na-dimmer Anyị ga-und ...
Nhazi nke Smart Lighting, Innovation na-adịgide adịgide
O doro anya na Frankfurt Lighting Fair bụ otu n'ime usoro kachasị mma maka ụlọ ọrụ ọkụ. Igwe ọkụ Anan na-egosi amara nke ika China na ụwa niile chere na ikpo okwu a kachasị emetụta. Site na mwakpo siri ike na ọkụ ọkụ ọdịnala, na ngwangwa nke ọkụ ọkụ ọkụ, rue ugbu a ...